USA: Shaqaale isbitaal oo qaaday Ebola - BBC News Somali
USA: Shaqaale isbitaal oo qaaday Ebola
Image caption Cudurka Ebola ayaa gaaray Maraykanka kadib markii uu u dhintay nin ka yimid Afrika.
Tijaaba hordhac ah ayaa waxa ay muujineysaa in mid ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ee gobalka Texas oo daweeyay Thomas Duncan, oo ah bukaan u dhintay cudurka Ebola ayaa isagana qaaday cudurka sida ay sheegayaan, saraakiisha Mareykanka.
"Waxaan ogeyn kiiska labaad in uu yahay mid dhab ah, waa aynu isku diyaarineynay suuragalnimo kasta," waxaa sidaa sheegay Dr David Lakey, oo ah guddoomiyaha laanta adeega caafimaadka qaran ee gobalka Texas.
Mr Duncan, oo cudurka Ebola uu ku dhacay isaga oo jooga dalkiisa Liberia, ayaa ku dhintay isbitaal ku yaala Dallas ee wadanka Mareykanka maalintii Arbacada aheyd.
Ninkan shaqaalaha caafimaadka ah ee uu cudurkan ku dhacay ayaanan la sheegin magaciisa.
Cudurka Ebola ee ka dilaacay dalalka Liberia, Guinea iyo Sierra Leone, ayaa waxa uu ku dhacay in ka badan 8,300 oo qof, isagoona dilay ugu yaraan 4,033 qof.
Mr Duncan ayaa lagu arkay cudurkan 30-kii bishii September, toban cisho kaddib markii uu tagay halkaasi.
Waa uu xanuunsaday dhowr cisho kaddib markii uu tagay Mareykanka, kaddibna waxa uu tagay isbitaal ku yaala Dallas isaga oo ay qandho badan heyso.
Inkasta oo uu u sheegay shaqaalaha caafimaadka in uu dhawaan ka yimid Liberia, ayaa waxa ay siiyeen dawooyin xanuun baa bi’iyayaal ah iyo antibiotic, waxa ayna u sheegeen in uu dib isaga laabto gurigiisa.
Mr Duncan ayaa mar danbe waxa lagu karantiilay qeyb ka tirsan isbitaalkaasi, waloow la siiyay daawo tijaaba aheyd markii dambe waa uu dhintay.
Ma cada in shaqaalaha caafimaadka ee laga helay cudurkan uu si toos ah ula sameeyey xiriir Mr Duncan, kaddib markii laga helay calaamada suura gal ah oo uu cudurkaasi leeyahay iyo weliba markii dib loo dhigay isbitaalka.
Qofkan shaqaalaha caafimaadka ahaa ayaa la sheegay in ay heysay qandho aan aad u darneyn jimcihii, waana la karantiilay waxaana loo gudbiyey qeybta baaritaanka, ee adeega caafimaadka ee gobalka Texas, sidaa ayaa lagu sheegay warbixin.
"Saraakiisha caafimaadka ayaa waxa ay wareysteen bukaanka iyaga oo doonayey in ay ogaadaan dadka uu la kulmay iyo in dadka qaar ay cudurka qatar ugu jiraan," ayaa lagu sheegay warbixinta.
Dadka sida tooska ah ula xiriiray ninkan shaqaalaha caafimaadka ah, kaddib markii lagu arkay calaamadaha cudurkaasi ayaa ayagana lala socon doonaa xaalkooda taas oo salka ku heysa qaabka ay isku dhexgaleen bukaanka iyo suuragalnimada ah in ay qaadeen caabuqan.
Konton qof oo si toos ah ama si dadban ula sameeyey xiriir Mr Duncan, ayaa la sheegayaa in xaalkooda lala socda.